केटोमा के हेर्ने: २० राम्रा गुणहरू तपाई एउटा मान्छेमा चाहानुहुन्छ - सम्बन्ध
केटोमा के हेर्ने: २० राम्रो गुणहरू जुन तपाईं एउटा मान्छेमा चाहानुहुन्छ
हामी सबैले पहिले हाम्रो सपनाको मानिस चित्रण गर्‍यौं, इमानदार हुनुहोस्!
उनीहरूले कस्तो देखिन्छन्, उनीहरूको कपाल कस्तो हुन्छन्, र उनीहरू कस्तो किसिमको लुगा लगाउँदछन् भन्ने बारे तपाईंले सायद सोच्नुभएको छ।
के को बारेमा गुणहरू एक मान्छे को, यद्यपि?
सामान्य बाहिरी ‘मलाई हाँस्न र एक राम्रो मान्छे हो,’ त्यो हो!
एक जना व्यक्तिलाई खोज्नका लागि हामीले शीर्ष २० गुणहरू सूचीबद्ध गरेका छौं तपाईलाई श्री सही भेट्टाउन।
१. उहाँ तपाईंलाई हाँस्नुहुन्छ।
हामीलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ - हामीले भनेका थियौं कि तपाईंको सपनाको मानिसमा हास्यास्पद हुनु भन्दा बढी छ…
यो अझै उल्लेखनीय छ, यद्यपि!
यदि तपाई नयाँ मानिसको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाई कसैलाई चाहानुहुन्छ तपाईको कम्पनीबाट तपाईले साँच्चिकै रमाईलो गर्नुभयो - र हाँसो त्यसको एक ठूलो अंश हो।
कसैसँग रहनु जसले तपाईंलाई हँसाउँदछ महान् सम्बन्धको लागि महत्वपूर्ण छ।
केटीहरू जो आफैलाई गम्भीरतासाथ लिदैनन् र तपाईंलाई हँसिलो मजाकको साथ उत्साहित गर्न सक्दछन् तपाईंको वरिपरि रमाइलो हुन्छ, त्यसैले कसैलाई खोज्नुहोस् जसले तपाईंलाई हँसाउँदछ र तपाईंको सपनाको मानिस फेला पार्ने बाटोमा तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ।
२. उहाँ हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ।
हेरचाह गर्ने कसैसँग रहनु सधैं राम्रो कुरा हुन्छ!
यो कसैमा पनि यस्तो उत्कृष्ट गुण हो, तर तपाईले धेरै समय रोज्नु भएको मानिसलाई अझ महत्त्वपूर्ण लाग्छ।
यसले देखाउँदछ कि उनीहरूसँग एक हल्का पक्ष छ र तपाईंको देखभाल गर्न चाहन्छ।
तिनीहरू सुरुमा अलि कडा जस्तो व्यवहार गर्न सक्लान्, तर दयालु केटाहरूले तपाईंको नम्र पक्ष तपाईंलाई प्रकट गर्दछ र तपाईं उनीहरूसँग अझ बढी प्रेम गर्नुहुन्छ।
He. उहाँ चलाख हुनुहुन्छ।
हामी केवल शैक्षिक प्रतिभाशाली कसैको बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौं - बौद्धिक हुनुको मतलब त्यो भन्दा बढी हो।
यसले तपाईंलाई अझ रमाईलो कुराकानी थाँहा गर्न मद्दत गर्दछ, र यसले तिनीहरू सिक्न मन पराउँदछ।
चाहे तिनीहरू पुस्तक स्मार्ट वा सडक-स्मार्ट हो, तपाइँको पार्टनरलाई जान्न यो आकर्षक छ, बुद्धिमान र बढ्न उत्सुक छ।
सम्बन्धित लेख: Sign चिन्हहरू तपाई आफ्नो पार्टनरसँग बौद्धिक अनुकूल हुनुहुन्छ
You. तपाईं आपसी हितमा भाग लिनुहुन्छ।
तपाईं जस्तो मनमोहक भावना हो उस्तै चीजमा रुचि राख्ने कसैलाई खोज्दै!
तपाईंले सबै समान चीजहरू मनपराउनु पर्दैन, तर केहि ओभरल्यापले ठूलो फरक पार्छ।
यसको मतलव तपाई एक अर्कासँग बढी सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र गहिरो तहमा एक अर्कालाई चिन्नुहुनेछ।
एजे ली र सेमी गुंडा विवाहित
तपाईलाई मन पराउने चीजहरू साझेदारी गर्न सधैं रमाईलो हुन्छ जो उनीहरूको बारेमा पनि भावुक हुन्छ, र यसले तपाईंलाई एकतामा ल्याउनेछ।
You. तपाईं समान मान राख्नुहुन्छ।
हाम्रो मूल मानहरू प्राय: डेटि ofको प्रारम्भिक चरणहरूमा बेवास्ता गरिन्छ।
हामी प्रारम्भिक आकर्षणमा वा हाम्रो 'बेस्ट सेल्फ' प्रस्तुत गर्नमा यत्तिको केन्द्रित छौं कि हामी कसरी हाम्रो विश्वास मिल्दछ भनेर जाँच गर्न बिर्सन्छौं।
तपाईको सपनाको मानिस आधारभूत मानव अधिकार, समानता र राजनीतिमा तपाई जस्तै आदर्श धारण गर्दछ।
अवश्य पनि, तिनीहरू पूर्ण रूपले इन-लाइन हुनु आवश्यक पर्दैन, तर समान विचार र मानहरू पुरुषमा खोज्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
He. उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ।
त्यहाँ अहंकारी हुनु र आत्मविश्वास हुनु बीच ठूलो भिन्नता छ - तपाईं एक जना मान्छे चाहानुहुन्छ जसले आफूलाई राम्रोसँग बोक्छ र आफैमा विश्वास गर्छ।
यो गुण उच्च वांछनीय छ किनकि तपाईं उनीहरूसँग डेटि। गर्नुहुनेछ जस्तो उस्तै छन्।
उनीहरूले अरू कसैको नाटक गर्न आवश्यक महसुस गर्दैनन्, ताकि तपाईंले तिनीहरूका वास्तविक आत्माहरू देख्नुहुनेछ।
कसैसँग डेट गर्न सजिलो छ, जो आफैंमा पहिले नै विश्वस्त छ - त्यहाँ असुरक्षा र संहिताको लागि कम ठाउँ छ।
He. उहाँ एक राम्रो संचारक हुनुहुन्छ।
एक मानिस खोज्नुहोस् जो एक किसिमले संचार गरीन्छ जुन तपाइँको लागि काम गर्दछ!
हामीले यो सब पहिले नै गरिसकेका छौं - तपाईं त्यस्तो व्यक्तिको लागि खस्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सञ्चार गर्नुहुन्न, र यसले सबै प्रकारको नाटक र चिन्ता निम्त्याउँछ।
यदि उनीहरूलाई लाग्छ कि यो हराईदै छ र केही दिनको लागि तपाईंको पाठहरूमा जवाफ नदिनुहोस्, तर तपाईं असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ र बरु दैनिक चेक-इन गर्नुहुन्छ भने, चीजहरू एकदमै गडबड हुनेछन्!
घर मा एक्लै र बोर हुँदा गर्न को लागी चीजहरु
तपाईं कसैलाई उत्तम भेट्ने आशा गर्न सक्नुहुन्न, र सबै सम्बन्धहरूले केही सम्झौता लिन्छन् , तर समान संचार शैली निश्चित रूपले एक मानिसमा खोज्नको लागि एक गुण हो।
He. ऊ आफैंको हेरचाह गर्छ।
यसले आत्मविश्वासको साथ लिंक गर्दछ, तर अझ अगाडि जान्छ।
एक मानिस जसले आफैंको हेरचाह गर्ने उपाय जान्दछ कि ऊ कस्तो प्रकारको मानिससँग बस्न चाहन्छ!
कसैसँग बस्न रमाईलो छैन जो आफैंको हेरचाह गर्दैनन् र आफैंको लायक देख्दैनन्।
तपाईलाई केटोको आवश्यकता पर्दैन जसले हरेक साँझ धार्मिक रूपमा अनुहारको मास्क लगाउँदछ, तर राम्रो राम्रो छ जो आफैंको राम्रो देखभाल गर्न चाहान्छ र यसको फाइदा देख्दछ भनेर कसैलाई भेट्न सकिन्छ।
He। उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ।
हामी यसो भनिरहेका छैनौं कि तपाईलाई केटा खोज्नु पर्छ जुन सबै समय काम गर्दछ, तर त्यस्तो राम्रो व्यक्तिलाई भेट्नु राम्रो हुन्छ जसले उसको स्वास्थ्यलाई हेरचाह गर्छ र सक्रिय छ।
यदि तपाईं विशेष रूपमा आफैँ सक्रिय हुनुहुन्न भने, तिनीहरू एक महान प्रेरक हुन सक्छन् - तपाईं सँगै दौडन सक्नुहुन्छ, सँगै योगा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, वा केवल बढ्न सक्नुहुन्छ र सँगै आफैंको देखभाल गर्न सक्नुहुन्छ।
सक्रिय हुनु र तपाईंको स्वास्थ्य हेरचाह गर्नु राम्रो गुण हो, र हामीले पहिले नै उल्ल .्घन गरेको हेरचाहको महत्त्व देखाउँदछ।
१०. उनी सञ्चालित छन्।
हामी सबैलाई एक go-getter को विचार मनपर्छ, सही?
यो एक अत्यधिक मूल्यवान् लक्षण हो - जोसँग आफ्नो काममा रमाईलो गर्नेको साथ हुनु, वा कम्तिमा नयाँ जागिर खोज्नको लागि केहि गर्दैछ।
कोही जो नयाँ चीजहरू जान्न इच्छुक छ र आफैंलाई धक्का दिन्छ, कडा परिश्रमबाट आफैलाई गर्व गर्दछ - यो त्यस्तो गुण हो जुन तपाईंलाई कसैको जीवनको बारेमा धेरै बताउँछ।
राम्रोसँग बसोबास गर्ने कसैको लागि नजाऊ!
कसैको लागि जानुहोस् जो सँधै आफैंको लागि उत्तम चाहान्छ - यसले तपाईलाई देखाउँदछ कि तिनीहरू केवल कुनै पनि पार्टनरको लागि बसेका छैनन्, र उनीहरूले देख्छन् तपाईं सबै भन्दा राम्रो को रूपमा, र केहि प्राप्त गर्न कडा परिश्रम लिन्छ!
११. उहाँ विनम्र हुनुहुन्छ।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं मितिमा हुनुहुन्छ र केटाले कुर्दै स्टाफलाई नराम्रो व्यवहार गर्दैछ, वा सडकमा अपरिचितहरूसँग रूखो छ।
नम्र हुनु त्यस्तो अन्तराष्ट्रिय गुण हो, तर यो एक हो हामीले सबै जना मानिसलाई खोज्नु पर्छ।
यसले तपाइँको व्यक्तित्वको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ र देखाउँदछ कि उनीहरू अरूको हेरचाह गर्दै, जिम्मेवार छन्, र आदर गर्छन्।
यसको मतलब यो पनि छ कि तपाईंले उनीहरूलाई आफ्ना माता-पितालाई भेटेर चिन्ता लिनु पर्दैन, किनकि तपाईंलाई थाँहा हुन्छ उनीहरूले अनुचित कुरा गर्दैन वा के गर्दैनन्!
१२. उहाँ आत्म-सचेत हुनुहुन्छ।
आत्म-सचेत हुनुको मतलब 'हिप्पीस' वा 'नयाँ युग' को अर्थ हुँदैन - तिनीहरू को हुन् भनेर जान्नको लागि उनीहरूले ध्यान गर्न वा यात्रा गर्न आवश्यक पर्दैन।
यसको मतलब यो हो कि तिनीहरूले आफ्ना कार्यहरूको लागि उत्तरदायीता लिन सक्दछन्, कि जब तिनीहरू गडबडी भएको र माफी माग्नुपर्दा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, र तिनीहरू आफैंसँग तालिकामा छन्।
यो जो कोहीमा उत्कृष्ट गुण हो, तर विशेष गरी पार्टनरमा।
यसको मतलब तिनीहरू आफूमा काम गर्न चाहेको कुरा जान्दछन् बरु तिनीहरूमा यो प्रक्षेपण गर्नु भन्दा, र यसको मतलब यो हो कि तिनीहरू जे-जति आत्म-कामका लागि छनौट गर्दछन्।
१.. उहाँ सहयोगी हुनुहुन्छ।
हामी सबै एक साथीको साथ हुन चाहन्छौं जसले हाम्रो लक्ष्यहरू समर्थन गर्दछ र हामीलाई ती हासिल गर्न मद्दत गर्दछ!
यो जान्न धेरै राम्रो हुन्छ कि कसैको पछाडि तपाईंको पिठो छ र जहिले पनि तपाईंलाई प्रेरित गर्नका लागि हुन्छ र तपाईंलाई आवश्यक पर्दा तपाईंलाई धक्का दिन्छ।
यो नयाँ क्यारियरको पीछा गर्ने बारेमा हो वा आफैंको लागि रमाईलो गर्ने कुराको बारेमा हो, एक जना मानिससँग जो तपाईंलाई खुशी पार्न सक्छ र तपाईंलाई निरन्तर प्रोत्साहित गर्न सक्छ त्यत्ति महत्त्वपूर्ण छ।
केहि पुरुषहरूले तपाईंलाई बनाउन सक्दछन् तपाईं पर्याप्त राम्रो छैन जस्तो लाग्छ , वा कि तपाईं मूर्ख हुनुहुन्छ तपाईं सोच्नको लागि चीजहरू गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं वास्तवमै गर्न चाहानुहुन्छ। उनीहरूले तपाईंको सफलताको बारेमा असन्तुष्ट महसुस गर्न सक्छन् वा राम्रो गर्नका लागि तपाईंलाई दोषी महसुस गराउँदछन्!
एक पार्टनर खोज्नुहोस् जो तपाईंलाई गर्व गर्दछ र उनीहरूको आफ्नो प्रगति, वा यसको अभावको बारेमा खराब महसुस नगरी तपाइँको उपलब्धिहरू मनाउन सक्दछ।
उहाँ एक प्रयास गर्नुहुन्छ।
एक जना मानिस खोज्नुहोस् जसले तपाईंको सम्बन्धमा समय र प्रयासहरू राख्दछु अचम्मको कुरा!
यसको मतलब यो होइन कि तपाईंलाई त्यस्तो आवश्यक छ जसले निरन्तर तपाईंलाई प्राथमिकता दिन्छ र जसको जीवन तपाईंको वरिपरि घुम्छ।
यसको मतलब हो कि तिनीहरूले तपाइँलाई राम्रो महसुस गराउन चाहन्छन्, कि तिनीहरूले तपाइँको जीवनमा मानिसहरूलाई भेट्न प्रयास गर्दछन्, कि तिनीहरूलाई थाहा छ उनीहरू तपाइँको लागि कती भाग्यशाली छन् र त्यो देखाउन निरन्तर काम गर्नेछन्।
१ you. उहाँ तपाईंलाई आदर गर्नुहुन्छ।
केही केटाहरू स्थितिको कारण, वा किनभने तिनीहरूले तपाईंलाई देखाउन चाहान्छन् प्रेमिका भएको मन पराउँछन्।
किन केहि मानिसहरु को कुनै साथी छैन
भन्न को लागी गर्व छ मान्छे को लागी ऊ हो संग तपाईं !
तपाईको सम्मान गर्ने मान्छे एकदम महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले कसैलाई खोज्नुहोस् जो तपाई आरामसँग तपाईको विचारहरु साझा गर्न सक्नुहुन्छ र जसले ख्याल राख्नुहुन्छ कि तपाईको आफ्नै राय छ।
सम्बन्धित लेख: कसरी एक व्यक्ति तपाइँलाई आदर गर्ने: ११ कुनै मूर्खता सुझावहरू छैनन्!
१ He. ऊ खेल खेल्दैन।
डेटि ofको शुरुवाती चरणहरूमा प्राय: धेरै खेल-खेल समावेश गर्न सक्छ, जुन धेरै चाँडो बोरिंग र तनावपूर्ण हुन्छ!
एक मान्छे मा हेर्न को लागी एक चमकदार गुणवत्ता सीधा भइरहेको छ।
तपाइँ कसैलाई चाहानुहुन्छ जसले यसलाई स्पष्ट पार्छ कि तपाइँको बारेमा उनीहरूले कस्तो महसुस गर्छन् र जसले तिनीहरु लाई इमान्दार हुन सक्छ।
तपाईं कसैसँग उभिनु भयो वा तिनीहरूको व्यवहारको कारण तपाईंको सम्बन्धमा असुरक्षित महसुस गर्नु हुँदैन।
कसैलाई आफ्नो भावनाहरु को बारे मा अग्रिम फेला पार्नुहोस्, र तपाईं एक स्वस्थ र पूरा सम्बन्ध मा बाटो मा राम्रो हुनेछ।
१.. ऊ इमान्दार छ।
इमान्दार र गल्ती गर्न स्वीकार गर्न सक्ने कसैलाई खोज्नु एकदम विशेष हुन्छ।
तपाई आफ्नो पार्टनरसँग सुरक्षित महसुस गर्न चाहानुहुन्छ, र त्यो इमान्दारिताबाट आउँछ कि उनीहरूले इमान्दारी र सत्यनिष्ठताको उच्च मापदण्डमा आफैँ पकड गर्छन्।
यदि तिनीहरू खुला छन र उनीहरूको भावनाहरू, उनीहरूका सीमा र आशाहरू बारे स्पष्ट छन् भने, तपाईंलाई थाँहा हुन्छ कि तपाईंले उनीहरूलाई धोका दिने वा गडबडी गर्ने बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन।
१.. उहाँ परिपक्व हुनुहुन्छ।
फेरी, परिपक्वता एक केटालाई हेर्नको लागि गुणको रूपमा यति अन्डररेट गरिएको छ!
तपाईं एक वयस्क छ जो कोही संग हुन चाहानुहुन्छ - जो एक साथ भेला गरीएको छ (पूर्ण रूपले होईन, अवश्य पनि - हामी मध्ये कसैसँग पनि यो सँधै १००% सँगै छैन!) र उचित कार्य गर्दछ।
हामीले सबैलाई डेट गरेका छौं जसको आचरणले सार्वजनिक रूपमा शर्मिन्दा महसुस गरेको छ, वा जसलाई साथीले मूर्ख बनाएको छ वा केहि नराम्रो काम गरेको खण्डमा हाम्रा साथीहरूलाई परिचय दिन हामी चिन्तित छौं!
सही तरीकामा परिपक्व र समझदार कसैको लागि जानुहोस् - बच्चाको मुटुमा हुनु राम्रो अभिनय हो जस्तो जस्तो छैन!
19. तपाईलाई उसका साथीहरु मन पर्छ।
एक मान्छे को साथीहरु तपाइँको बारे मा धेरै बताउन।
तपाईंले चाँडै महसुस गर्नुहुनेछ कि यदि उनीहरू तपाईंको वरिपरि स्वयम हुन् भने।
यदि उनीहरू उनीहरूको साथीहरू बिल्कुल फरक व्यक्ति बन्न सक्छन्, त्यहाँ मौका छ तिनीहरूले तपाईंलाई प्रभाव पार्नको लागि केही काम गरिरहेछन्।
कसैको फेला पार्नुहोस् जसको मित्रता समूहले तपाईंलाई एक मान्छेमा के चाहान्छ भनेर दर्साउँछ।
हुनसक्छ तिनीहरू सबै मतवाला र गडबडी हुन्, जसले तपाईलाई देखाउँदछ कि तपाईको मानिस सायद समान छ।
हुनसक्छ उनीहरूसँग राम्रो कुराकानी भएको छ र तपाईंलाई समूहमा स्वागत गर्दछ, जसले देखाउँदछ कि ऊ साथीहरूमा ठूलो स्वाद पाएको थियो र तपाईंलाई उनीहरूसँग बाहिर बस्दा रमाईलो लाग्नेछ।
आँखाहरू हाम्रो आत्माका लागि विन्डोज हुन् मित्रहरू तपाईंको व्यक्तिको वास्तविक आत्मको लागि विन्डोजहरू हुन्!
२०. उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ (सामान्यतया)।
कोही पनि कोहीको वरिपरि हुन चाहँदैन जो सँधै डम्पमा र तल हो सबै कुराको बारेमा गुनासो छ !
यदि तपाईं पहिले नै कसैको जीवन र समर्थन प्रणालीको अंश हुनुहुन्छ र उनीहरूसँग गाह्रो समय छ, अवश्य पनि तपाईले टाढा रहनु पर्छ।
यद्यपि, यदि तपाईंले भर्खर कसैलाई डेटि started गर्न शुरू गर्नुभएको छ र ती सबै समयमा रुन र रेन्ट गर्दछन् भने, तपाईं अघि बढ्न सक्नुहुन्छ!
केटाको लागि जानुहोस् जसले चीजहरूमा सकारात्मक भेट्दछ - र तपाईंलाई पनि त्यस्तै गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
यो एक मान्छे मा एक महान विशेषता हो र देखाउँछ कि ऊ तपाईं खुशी महसुस गर्न चाहान्छ - तपाईंको सम्बन्धको लागि एक आशाजनक संकेत।
अझै निश्चित हुनुहुन्न कि यी मध्ये कुन गुणहरू तपाईंले तपाईंको इच्छा सूचीको माथि राख्नुपर्छ? रिलेशनशिप हीरोको सम्बन्ध विशेषज्ञसँग अनलाइन कुराकानी गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई चीजहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। केवल
कसरी जान्ने यदि तपाईं सम्बन्धको लागि तयार हुनुहुन्छ भने: १: स्पष्ट चिन्हहरू
१ No कुनै बुलश * टिप्स यति सजिलो प्रेममा पर्नु रोक्नको लागि सुझावहरू छैन (वा कुनै पनी)
१२ वस्तुहरू पुरुषहरू एक महिलामा हेर्छन् (र निश्चित रूपमा पत्नीमा चाहानुहुन्छ)
म जीवन मा एक हारेको जस्तो लाग्छ
कसैको मृत्युको लागी कविता
एक ब्रेक अप कसरी सुरु गर्ने
ब्याकप्याक बच्चा कति पुरानो हो
के उहाँ म संग सुत्न रमाईलो गर्नुभयो?
म हरेक मानिस को अधिकार को लागी एक वास्तविक अमेरिकी लडाई हुँ